Ọzọkwa, ana m arụ ọrụ na azụmaahịa nke na-ahapụ ụlọ ọrụ na-eso m ebuli ọnụnọ YouTube haNa, ọzọkwa, ụlọ ọrụ ha na-arụ ọrụ nwere nke akaụntụ niile ha. Anọ m na-eme mkpesa banyere ndị ọrụ na-eme nke a ihe karịrị afọ iri ugbu a wee na-adụ ndị azụmaahịa ọdụ ka ha ghara ime nke a. Ọ dịghị azụmaahịa ọ bụla kwesịrị inye nbanye na okwuntughe iji jikwaa akaụntụ ọ bụla.
Appropriatezọ kwesịrị ekwesị iji rụọ ọrụ ụlọ ọrụ ọ bụla bụ iji atụmatụ ọrụ nke isi nyiwe niile, site na ndị na-edebanye aha ngalaba, ndị ọrụ weebụ, gaa na ntanetị mmekọrịta iji nye gị ụlọ ọrụ nnweta njikwa ma ọ bụghị mgbe ịgba ụgwọ na nwe ohere. Ọ bụrụ na ị na-eme adịghị, e nwere bụ mgbe ohere na gị n'ụlọnga na ị na-adapụta na ọ bụ ike na-azụ nwe ma ọ bụ ohere gị ọzọ gị n'ụlọnga. Ma ọ bụ ka njọ, ụlọ ọrụ ma ọ bụ onye ndụmọdụ gị na ya na-arụkọ ọrụ nwere ike ịpụ na azụmaahịa ma ọ bụ na ịnweghị ịnwe ya mgbe ịchọrọ ya. Ekwela ka azụmahịa gị dị ka nke a!
Taa, aga m ejegharị gị otu esi enye gị ụlọ ọrụ gị ma ọ bụ onye na-ese vidiyo na YouTube Channel site na itinye ha dị ka njikwa nke akara gị na Google.
Not naghị enye nnabata na okwuntughe na ịdabere na ụlọ ọrụ gị iji chebe ha.
You're dịghị mgbe inye nwe gị gị n'ụlọnga, ya mere, e nweghị nsogbu ma ọ bụrụ na ị na-ekpebi ịhapụ. Naanị ị nbanye ma wepu ohere ha dị ka njikwa.
Ugbu a ị nọ na nke gị nkọwa akaụntụ brand ma họrọ jikwaa ikikere maka ndị ọrụ gị.
Ọ bụ ya ... ugbu a onye ọrụ gị ga-enweta akwụkwọ ozi email ebe ha nwere ike ịnabata ọrụ ha wee malite ijikwa YouTube Channel gị!